Xiisad u dhaxeysa Al-Shabaab iyo maleeshiyooyin deegaanka oo ka jirta Koofurta Mudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 5 October 2015
Wararka ka imaanaya deegaanada Bacaad-weyn iyo Camaara ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay ka jirto, kadib markii maleeshiyooyin hubeysan is abaabulaya, isla markaana ka soo horjeeda Al-Shabaab ay dhaq dhaqaaq ka wadaan deegaanka.
Al-Shabaab ayaa jimcihii la wareegay deegaanka Camaara ee koofurta Mudug, waxaana arrintan ay baqdin gelisay dadka deegaanka oo ka cabsi qaba dagaalo ka dhaca deegaanada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamo ka tirsan Maamulka Galmudug ay soo gaareen deegaanka Bacaad-weyn, waxaana ciidamadan doonayaan inay iska difaacaan Al-Shabaab.
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa qorsheynaya inay weeraraan deegaanka Bacaad-weyn oo Al-Shabaab ay u jireen illaa 5-KM.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labada dhinac ay isku hor-fadhiyaan duleedka Bacaad-weyn, waxaana deegaanadan oo caan ku ahaa soo noq noqshada dagaal beeleedyada ka bilowday barakac ay sameynayaan dadka reer miyiga iyo kuwa xoolo dhaqatada.
Al-Shabaab ayaa gacanta ku haya qeybo ka mid ah Gobolka Mudug, waxaana saldhig weyn ku leeyihiin degmada Xarardheere oo ah degmo istiraatiiji, lehna Xeeb.